Kubvira payakagadzwa, Tonglu yakagara ichitevedzera hunyanzvi hwetarenda zano uye ndokutora matanho matsva ekuzadzisa leapfrog budiriro. Tonglu inoomerera kune yekuvandudza pfungwa ye "manejimendi mashandiro ekuvandudza, matarenda anosimbisa bhizinesi, uye tsika inosimudzira bhizinesi", zvine simba rinokudziridza tarenda sumo zano, uye inoshandisa kumisikidzwa kwechikwata chevapfumi senzvimbo yekutanga yekusimudzira kusimudzira, mamiriro, hunyanzvi uye hujaya hwekushanda uye manejimendi Inomhanya track. Muchirongwa chetarenda, yakasarudzika "projekiti + tarenda + tekinoroji + manejimendi" musika-wakasarudzika sarudzo uye mashandiro emabasa uye kurima nzira yekukurudzira zvakaumbwa zvishoma nezvishoma, zvichipa kutamba kuzere kune simba rekugadzira uye kurudziro yevashandi vese, uye kubata vatengi vakuru iyo Kambani Orders, kukwidziridzwa kwehunyanzvi, uye kuwedzera kwaisa hwaro hwakasimba.
Parizvino, Tonglu ine vashandi vanopfuura makumi matatu, vane matarenda epamusoro-soro uye epamusoro-soro emakomponi ari kukura nekukurumidza; kune huwandu hukuru hwevashandi vane rakakura rekuparadzira, rakakura kufukidza, uye akasarudzika akaturikidzana. Chikamu chevashandi vane dhigirii reBachelor kana pamusoro chiri 75.6%, uye mazhinji acho anobva kunzvimbo dzinozivikanwa dzepamusha dzedzidzo yepamusoro, senge Hunan University, Hunan Normal University, uye Yangzhou University, vane ruzivo rwakanaka rwekudzidza uye hunyanzvi
Tonglu inotora mutengi seyakadzika, ine yakanakisa chigadzirwa uye sevhisi mhando senge yepakati kukwikwidza, uye ibasa redu kupa vatengi nemhando yepamusoro zvigadzirwa zvakajairwa zvevakuru zvigadzirwa. Kuburikidza nekugadzirisa uye hunyanzvi hwekushambadzira uye manejimendi mamodheru, isu tinoramba tichizivisa nhevedzano yezvigadzirwa. Natsiridza zviyero zvebasa, shandisa mhando dzemabhizinesi matsva, sanganisa zvakanakira capital, manejimendi, tekinoroji uye vekunze uye vehukama hwehukama hwehukama, uye kuzvipira kududziro yemafungiro matsva uye kududzirwa kwehunhu hwezvigadzirwa zvevakuru kunakidzwa kwega uye kukwana. Inotora yakasimba chigadzirwa sarudzo yekushandisa, uye inosarudza zvese zvigadzirwa zvinoenderana nemabatiro akasimba kuona yepamusoro-yekupedzisira chigadzirwa mhando uye kuravira, uye zvienderane neakanakisa epamhepo ekutenga ruzivo uye neyakanakisa mushure-yekutengesa sevhisi.
Tichitungamirwa nezano rakakura renyika imwe bhanhire uye mugwagwa mumwe, Tonglu inogara ichitevedzera nzira yesainzi uye yakagadzikana yekusimudzira, nevatengi vari musimboti, timu senzvimbo yekutangira, uye kusimudzira sehwaro, kuita budiriro yehunyanzvi-hwakavakirwa mabhizinesi, zvikwata uye mabhizinesi akasimba. Philosophy, simbisa zvakawanikwa zviripo uye mugove wemusika, tarisa pakuwedzera kutsva kwezvigadzirwa zvevakuru, tarisa pane budiriro, kusimudzira zvipenyu uye kusimudzira, kubatsira vatengi kuwana kukosha, kuona kukosha uye kukoshesa kukosheswa, uye kuzadzisa kusimudzira-mberi kwebhizimusi mukubatana kubatsirwa uye kuhwina-kuhwina mamiriro. Kuvaka Tonglu Development kuita yekutanga-kirasi bhizinesi ine yakanaka yemagariro mukurumbira uye musika mukurumbira. "Budiriro chete ndiyo inogona kurarama;
hunyanzvi chete hunogona kukura; kungoshinga kuve wekutanga kugadzira ramangwana ", uku kutsunga kwaTonglu kutarisa kune ramangwana nekutsvaga budiriro. Sanganisa zvakanakira zviwanikwa zvakawanda, kusimudzira kubatana kweindasitiri, tora mhando yemhando uye manejimendi ekuvandudza se mapapiro, batanidza kubatana kwevashandi vese, shanda pamwe chete muchikepe chimwe chete, mafudzi kumusoro uye pasi, uye kusimukira nesainzi.Tinotenda kuti ramangwana reTonglu richava rakajeka!